Hilton 1, Hyatt 2, Marriott kaliya 5 oo ka badbaaday ganacsiga COVID |
Jebinta Wararka Safarka • Warka Warshadaha Martigelinta • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • Ammaanka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • News Trending
Hilton 1, Hyatt 2, Marriott kaliya 5 oo ka badbaaday ganacsiga COVID
Hilton 1, Hyatt 2, Marriott
Bogga ugu weyn » posts » Jebinta Wararka Safarka » Hilton 1, Hyatt 2, Marriott kaliya 5 oo ka badbaaday ganacsiga COVID
Sidee silsiladihii waaweynaa ee hudheelku uga badbaadeen hoos u dhaca COVID-19, markay timaaddo ilaalinta qiimaha iyo saamiyada saamiyada. Qaybta hudheelku gabi ahaanba way joogsatay sanadkii hore, dib-u-eegisyadeedana waxaa muujiyey hoos u dhaca qiimaha sumcadda ee ku dhowaad dhammaan 50-ka nooc ee hudheel ee ugu qiimaha badan.
Wadarta qiimaha 50-ka magac ee ugu qiimaha badan huteellada adduunka ayaa hoos u dhacay 33% (US $ 22.8 bilyan) maadaama waaxda ay gorgortan ka dhacayso COVID-19 masiibada.
Hilton retains title of world’s most valuable hotel brand, despite recording a 30% brand value decrease to US$7.6 billion.
Hyatt waa nooca ugu dhakhsaha badan ee ku soo koraya 10 sare iyo mid ka mid ah laba nooc oo kaliya si loo qoro koritaanka qiimaha sumcadda ee 50 sare, ilaa 4%.
Qeybta hoteelku waa mid adkeysi badan. Maaddaama adduunku bilaabay inuu dib u furmo mar labaad, waxaan durbaba markhaati ka nahay horumarin xoog leh oo ku saabsan ballansashada iyo heerarka deganaanshaha ee guddiga oo dhan, oo soo bandhigaya awoodda noocyada in kasta oo buuqii sanadkii la soo dhaafay dhacay.
Hilton mar labaad waa sumcadda ugu qiimaha badan adduunka ee hudheellada, inkasta oo la diiwaan geliyey 30% hoos u dhac ku yimid qiimaha astaanta oo ah US $ 7.6 bilyan. In kasta oo dakhliga Hilton uu si aad ah u saameeyay tan iyo markii uu dillaacay aafada, calaamaddu waxay muujineysaa kalsoonida istiraatiijiyadeeda kobaca, iyadoo lagu dhawaaqayo qolal dheeri ah oo gaaraya 17,400 dhuumaheeda, taasoo wadarta guud ka dhigeysa in ka badan 400,000 qolal cusub oo la qorsheeyay - kor u kac 8% ah sanadkii hore. Hilton sidoo kale waxay ku faantaa faylalka hudheelka ugu qiimaha badan, iyada oo toddobadeeda nooc ee ka muuqda ka soo muuqashada ay gaarayaan wadarta qiimaha sumcadda oo dhan US $ 13.8 bilyan.
Marriott (hoos udhacay 60% ilaa US $ 2.4 bilyan), ayaa hoos ugu dhacay 5th kaalinta 2nd, ka dib markii ay luntay in ka badan kala badh qiimaha sumadeeddeeda. Sanadkii la soo dhaafay, dakhliga calaamadda ee laga heli karo qolkiiba wuxuu hoos u dhacay 60% marka loo eego 2019 iyo degganaanshaha adduunka wuxuu ahaa kaliya 36% sanadka.
Hyatt jeegga 2nd kaalinta maaddaama mid ka mid ah laba magac oo keliya ay ku jirto qiimeynta si loo diiwaan geliyo kororka qiimaha sumcadda waa Hyatt (ilaa 4% illaa US $ 4.7 bilyan). In kasta oo aafadu saamayn ku yeelatay waxqabadkeeda, kobaca qolka saafiga ah ee Hyatt wuu xooganaa, wuxuu furay 72 huteelo wuxuuna galay 27 suuq oo cusub. Intaa waxaa sii dheer, astaanta ayaa sii waday inay fuliso saxiixyo cusub si ay u ilaaliso dhuumaha, taas oo ka dhigan koritaanka 40% ee qolalka hoteelka jira mustaqbalka.
Taj waa qaybta ugu adag
Marka lagu daro cabirka guud ee sumcadda, Brand Finance sidoo kale waxay qiimeysaa xoogga qaraabada ee noocyada, iyadoo lagu saleynayo arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga suuqgeynta, aqoonta macmiilka, qanacsanaanta shaqaalaha, iyo sumcadda shirkadaha. Marka loo eego shuruudahan, Taj (qiimaha sumcadda US $ 296 milyan) waa astaanta hudheellada adduunka ugu xooggan, iyada oo leh Calaamadda Awoodda Brand (Index Index Index (BSI) ee 89.3 ka mid ah 100 iyo qiimaynta awoodda AAA ee u dhiganta.
Caan ku ah adeegyadeeda macaamiisha heer caalami ah, silsiladda hudheelka raaxada leh ayaa si aad ah ugu dhibco badan kormeerayaasha caalamiga ah ee 'Global Brand Equity Monitor' si loo tixgeliyo, loo barto, loo soo jeediyo, looguna magac daro gaar ahaan suuqyadeeda Hindiya.
Taj hirgalinteeda guuleysiga ee qorshaheeda 5-ta sano ah - oo diiradda saareysa iibinta hantida aan xudunta u aheyn, noqoshada lahaanshaha yaraanta iyo yareynta ku tiirsanaanta meelaha raaxada - oo ay ku xigto korsashada degdegga ah ee istiraatiijiyaddeeda cusub ee RESET 2020, oo bixisa qaab isbadal si loo caawiyo sumadda ayaa ka gudubtay caqabadda cudurka faafa, waxay gacan ka geysatay dib u soo celinta sumadda ee darajada markii ugu horreysay tan iyo 2016 ee 38th kaalinta.
Inkastoo ay booqo.com duubista qiimo dhimis sumcadeed oo dhan 19% US $ 8.3 bilyan, way dhaaftay Airbnb (hoos u dhacay 67% illaa US $ 3.4 bilyan) iyo Kooxda Trip.com (hoos ugu dhacay 38% illaa US $ 3.5 bilyan) si aad u noqotid nooca ugu caansan waqtiga firaaqada & dalxiiska adduunka. Nooca ugu dhaqsiyaha badan ee dhacaya sanadkan, Airbnb, wuxuu jaray rubuc ka mid ah shaqaalihiisa sanadkii hore, waxaana lagu qasbay inuu dib u cabbiro dadaallada cusub ee ay ku lahayd dhuumaha, oo ay ku jiraan meelaha raaxada iyo duulimaadyada.
Dooxada faraxsan (hoos udhaca 37% ilaa US $ 1.2 bilyan) waa astaanta ugu xoogan waaxda, oo leh dhibcaha BSI ee ah 84.1 oo 100 ah iyo isbarbar dhig xoog leh oo AAA ah.
Saddex soo-galooti cusub oo ku jira darajaynta
Waxaa jira seddex cusub oo soo galaya sanadkan, Tiyaatar AMC (qiimaha sumcadda US $ 1.8 bilyan) 7th, Priceline (qiimaha sumcadda US $ 1.5 bilyan) 8th, Iyo Magaalada Shiinaha ee Shenzhen (qiimaha sumcadda US $ 1.3 bilyan) 9th.
Silsiladda shineemo ee ugu weyn adduunka, AMC, ayaa la dhibtootay maadama shineemooyinka la xiray iyada oo ay xirnaayeen xirmooyinka adduunka. Astaantu waxay rajeyneysaa in nasiibkoodu uu dib udhaco madaama macaamiisha ay si tartiib tartiib ah u bilaabayaan inay dib ugu noqdaan shaashadda weyn iyo blockbusters dib udhacay ayaa ugu dambeyn la sii daayay
Saddexda soo-galootiga cusub waxay riixeen seddex magac oo dalxiis, kuwaas oo ka dhacay qiimeynta sanadkan: Royal Caribbean International, Norwegian Cruise, iyo Carnival Cruise Lines.
Dhammaan hudheelada waxay ahaayeen kuwo jilicsan oo bixiya HFaa'iidooyinka Elite Elite xubnaha.
Source: Madadaalada Madadaalada & Dalxiiska 10 2021